DH-ROC tsy vita printy milina fanontam-pirinty Flexo - DH Flexo Printing
DH-ROC fiara tsy matotra milina fanontam-pirinty Flexo
Ny DH-ROC dia milina fanontam-pirinty maoderina maoderina.
1, teknolojia fanaingoana, fiovana haingana
Manaiky ny teknolojia fanala amin'ny takelaka cylinder sy ny anilox roller (fakantsary) mba hahazoana fiovana haingana.
2, fiara fitaterana Gearless
Ny milina fanontam-pirinty tsirairay dia tarihan'ny servo 8 mba hisorohana ny fitazonana fitaovana rehefa mihazakazaka haingana.
Noho ny rafitra fiara tsy misy fiara, ny ROC dia manana fahombiazan'ny asa miverimberina. Afaka manoratra sy mitadidy izy io: manoritra ny toerana, ny fametrahana ny tsindry, ny fihenjanana.
3, rafitra fiompiana automatique teteza
ROC dia manamboatra rafitra fiompiana fandefasana fiara mifono vy amin'ny mpanamboatra sy manangona. Ny drafitra miavaka dia afaka miantoka ny fiarovana ny fifandraisana.
4, avo lenta ny rivotra mahamay
Aorian'ny fanontana, miakatra ny substrate ary mandalo ilay singa fanamainana avo lenta mba hahatratrarana haingam-pandeha avo lenta. Ny fonosan'ny singa fanamainana dia afaka mivoaka ho an'ny kofehy substrate ary ny rivotra mafana dia madiodio mba hampidina ny fanjifana herinaratra.
5, Inline 100% rafitra fanaraha-maso kalitao
ROC dia manapa-kevitra ny rafitra fanaraha-maso ny kalitao. Raha vao hita ny hadisoana, dia hanome fanairana sy hanangona vaovao mahaliana ny rafitra.
6, rafitra fanaovan-gazety
Ny rafitra mpanamory fiarovan-dabozia dia afaka manome antoka ny fiarovana ny fahamarinan-toerana Mandritra izany, miaraka amin'ny inilo anilox rafitra fanadiovana (fakan-kevitra), dia mety hampidina ny fotoana sy ny fandaniana betsaka.
7, rafitra fanaraha-maso enti-mody
* Soraty ny rakitsoratra / tsaroanao
* Fanontam-pirinty / fampahatsiahivana
* Fomba fisoratana anarana
* Fanonerana ny tsimok'aretina rehefa mihazakazaka haingana.
* Rafitra fanaraha-maso kalitao
* Rafitra fanoratana fiara
* Fanaraha-maso ny fihenan'ny fihodinana